- VIP xamuul
Bogga ugu weynOgeysiiska sharciga iyo siyaasada asturnaanta
DELPIT NEGOCE, iyada oo la tixgelinayo xuquuqda shaqsiyaadka, gaar ahaan marka la eego farsamaynta otomaatiga ah, iyo rabitaanka daahfurnaanta macaamiisheeda, waxay hirgelisay siyaasad dabooleysa dhammaan howlahaan soo socda, ujeedooyinka ay daba socdaan kan dambe iyo sidoo kale macnaha ficillada ay heli karaan shaqsiyaadka si ay sida ugu fiican ugu gutaan xuquuqdooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la tashato goobta: https://www.cnil.fr/
Nooca khadka tooska ah ee internetka ee shuruudahan adeegsiga ayaa ah kan kaliya ee la diidan yahay inta lagu jiro isticmaalka goobta iyo illaa nooc cusub uu beddelayo.
Qodobka 1 - ogeysiisyada sharciga
1.1 Goobta (hadda kadib "goobta"): Truffes-Vip.com
1.2 Daabacaha (hadda kadib "daabacaha"):
degan: 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,
SIREN n °: 441 151 925,
lambarka taleefanka: 05 64 49 00 11,
cinwaanka emaylka: contact@truffes-vip.com
1.3 Marti-geliye (hadda kadib "martida loo yahay"):
Truffes-Vip.com waxaa martigelinaya OVH, oo xafiiskeeda guud uu ku yaalo SAS oo leh raasamaal dhan 10 Euros RCS Roubaix. Dalxiis dalxiis oo 000 000 424 761 Code APE 419A - VAT nambarka: FR 00045 6202 22 424 Madaxa xafiiska: 761 rue Kellermann 419 Roubaix - France.
Qodobka 2 - Helitaanka goobta
Gaaritaanka goobta iyo isticmaalkeeda waxaa loo habeeyay adeegsi shaqsiyeed oo adag. Waad ogolaatay inaadan u isticmaalin boggan iyo macluumaadka ama xogta ku jirta ujeedooyin ganacsi, siyaasadeed, ujeeddooyin xayeysiis iyo nooc kasta oo weydiisasho ganacsi ah iyo gaar ahaan dirista e-maylada aan la weydiin
Qodobka 3 - Mawduuca bogga
Dhammaan noocyada, sawirrada, qoraallada, faallooyinka, sawirrada, sawirrada, dhaqdhaqaaqa ama aan ahayn, isku xigxiga fiidiyowga, dhawaaqyada, iyo sidoo kale dhammaan codsiyada kombiyuutarka ee loo isticmaali karo in laga dhigo goobtan inay shaqeyso iyo guud ahaan dhammaan walxaha lagu soo saaro ama loo isticmaalo bogga waa ay ilaalinayaan sharciyada dhaqan gala marka loo eego hantida aqooneed.
Iyagu waa hantida buuxda ee dhammaan daabacaadaha ama la-hawlgalayaasheeda. Soo-saar kasta, matalaad, adeegsi ama la-qabsasho, nooc kasta ha ahaadee, dhammaan ama qayb ka mid ah waxyaabahan, oo ay ku jiraan codsiyada kombuyuutarka, iyada oo aan oggolaansho qoraal ah hore ee daabacaha, si adag loo mamnuucay. Xaqiiqda ah in daabiciyuhu uusan bilaabin dacwadaha markuu ka warqabo adeegsigaan aan loo idman macnaheedu ma aha aqbalida adeegsiga la sheegay iyo ka-dhaafitaanka dacwadda.
Qodobka 4aad - Maareynta goobta
Maamulka wanaagsan ee bogga, tifaftiraha ayaa sameyn kara waqti kasta:
- hakinta, carqaladeynta ama xaddidida gelitaanka dhammaan ama qayb ka mid ah goobta, u keydinta marinka goobta, ama qaybo ka mid ah goobta, nooc gaar ah oo dadka isticmaala internetka;
- tirtir wixii macluumaad ah ee carqaladeyn kara howlaheeda ama ka horimaan kara shuruucda qaranka ama kuwa caalamiga ah, ama xeerarka Netiquette;
- ka jooji goobta si aad u cusbooneysiiso.
Qodobka 5aad - Xilalka
Daabacaha mas'uuliyad lama saari karo haddii ay dhacdo fashilaad, burbur, dhibaato ama carqaladeynta hawlgalka, ka hortagga gelitaanka goobta ama mid ka mid ah shaqooyinkiisa.
Waxyaabaha ku xiraya barta aad isticmaasho waa mas'uuliyaddaada keliya. Waa inaad qaadataa dhammaan tallaabooyinka ku habboon si aad u ilaaliso qalabkaaga iyo xogtaada, gaar ahaan weerarada fayraska ee internetka. Sidoo kale adigaa kali mas'uul ka ah bogagga iyo xogta aad la tashato.
Madbacadda mas'uul kama noqon karto haddii ay dhacdo dacwad sharci ah oo adiga kaa dhan ah:
- isticmaalka goobta ama adeeg kasta oo laga heli karo internetka;
- inaad u hogaansami weydo shuruudahaan guud.
Daabacaaruhu mas'uul kama aha wixii waxyeelo ah ee naftaada, kooxaha saddexaad iyo / ama qalabkaaga ka dhasha isku xirnaantaada ama isticmaalkaaga goobta oo aad ka tanaasusho wixii tallaabo ah ee isaga ka soo baxa taas darteed.
Haddii daabacaha ay ahayd inuu ku xirnaado heshiis ama sharci dartiis isticmaalkaaga goobta darteed, wuu kaa hor imaan karaa si aad u hesho magdhaw dhammaan waxyeelada, wadarta, xukunnada iyo kharashaadka ka dhalan kara nidaamkan.
Qodobka 6 - Xiriirinta Hypertext
Aasaasidda ay adeegsadayaasha isticmaala dhammaan xiriiriyeyaasha hypertext ee dhammaan ama qayb ka mid ah goobta waxaa oggolaaday madbacadda. Xidhiidh kasta waa in laga saaraa codsi daabacaha.
Macluumaad kasta oo lagu heli karo iyada oo loo marayo isku xirka bogagga kale ma daabacan daabacaha. Daabacaaluhu xaq uma laha nuxurka ku jira xiriiriye la sheegay.
Qodobka 7 - Xog ururinta iyo ilaalinta
Xogtaada waxaa ururiyey Truffes-Vip.com.
Xogta shaqsiga ah waxaa loola jeedaa macluumaad kasta oo la xiriira qof dabiici ah oo la aqoonsan yahay ama la aqoonsan karo (maadada xogta); waxaa loo aqoonsan karaa qof la aqoonsan karo, si toos ah ama si dadban, gaar ahaan tixraaca magac, lambar aqoonsi ama hal ama in ka badan oo canaasiir gaar ah, gaar u ah jirkiisa, jir ahaaneed, hidde ahaan, nafsi ahaan, dhaqaale, dhaqan ama bulsho.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee laga soo ururin karo goobta ayaa badanaa loo isticmaalaa daabacaha si uu u maareeyo xiriirka adiga, iyo meesha ay ku habboon tahay ka shaqeynta amarradaada.
Xogta shakhsiga ah ee la ururiyey waa sida soo socota:
- Magaca dambe iyo magaca koowaad
- Cinwaanka boostada
- lambarka taleefanka
- Xog maaliyadeed: iyada oo qayb ka ah bixinta badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo Platform-ka, Platform-ku wuxuu diiwaangeliyaa xogta maaliyadeed ee la xidhiidha kaarka deynta isticmaalaha.
Qodobka 8aad - Xaqa helitaanka, toosinta iyo ka-noqoshada xogtaada
Marka la adeegsanayo qawaaniinta lagu dabakhi karo xogta shakhsiga ah, isticmaaleyaashu waxay leeyihiin xuquuqda soo socota:
Xaqa helitaan: waxay ku dhaqmi karaan xuquuqdooda helitaan, si ay u ogaadaan xogta shaqsiyadeed ee iyaga ku saabsan, iyagoo u qoraya cinwaanka emaylkan soo socda: contact@truffes-vip.com. Xaaladdan oo kale, ka hor intaan la hirgelin xuquuqdan, Platform-ka ayaa codsan kara caddaynta aqoonsiga isticmaalaha si loo xaqiijiyo saxnaanshihiisa.
Xuquuqda saxitaanka: haddii xogta shakhsiga ah ee ay hayso Platform-ka ay khaldantahay, waxay codsan karaan cusbooneysiinta macluumaadka.
Xaqa loo leeyahay in la tirtiro xogta: isticmaaleyaashu waxay codsan karaan tirtirida xogtooda shaqsiga ah, iyadoo la raacayo sharciyada ilaalinta macluumaadka ee khuseeya.
Xaqa loo leeyahay in la xadido ka shaqeynta: isticmaaleyaashu waxay weeydiisan karaan Platform-ka in la xadido ka shaqeynta xogta shaqsiyeed iyadoo la raacayo fikradaha ay bixisay GDPR.
Xuquuqda diidmada ka shaqeynta xogta: isticmaaleyaashu way diidi karaan in xogtooda lagu shaqeeyo iyadoo la raacayo fikradaha ay soo bandhigtay GDPR.
Xuquuqda la rari karo: waxay sheegan karaan in Platform-ku uu ka siiyo xogta shaqsiyadeed ee ay bixiyeen si loogu gudbiyo Platform cusub.
Xaquuqdan waad ku adeegsan kartaa adoo nagala soo xiriiraya cinwaanka soo socda:
Ama emayl ahaan, cinwaanka:
Codsi kastaa waa inuu lasocdaa nuqul ka mid ah dukumenti aqoonsi oo saxeexan oo saxeex ah isla markaana sheeg cinwaanka uu daabacaddu kula xidhiidhi karo codsadaha. Jawaabta waxaa lagu soo diri doonaa hal bil gudahood marka la helo codsiga. Muddadan hal-bil waxaa lagu kordhin karaa laba bilood haddii kakanaanta codsiga iyo / ama tirada codsiyada ay sidaa u baahan yihiin.
Intaa waxaa sii dheer, iyo ilaa Sharciga Lambarkiisa 2016-1321 ee Oktoobar 7, 2016, dadka sidaas doonaya waxay leeyihiin suurtogalnimada abaabulidda masiirka xogtooda ka dib dhimashadooda. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mawduuca, waxaad kala tashan kartaa bogga CNIL: https://www.cnil.fr/.
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay ku gudbin karaan cabasho CNIL websaydhka CNIL: https://www.cnil.fr.
Waxaan kugula talineynaa inaad marka hore nala soo xiriirto inta aanad dacwad ka gudbin CNIL, maxaa yeelay waxaan u joognaa sidii aad u xallin lahayd dhibaatadaada.
Qodobka 9aad - Adeegsiga xogta
Xogta shakhsiga ah ee laga soo ururiyey isticmaaleyaasha waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo adeegyada Platform-ka, si loo horumariyo loona ilaaliyo jawi aamin ah. Aasaaska sharciga ee howsha waa fulinta heshiiska u dhexeeya isticmaalaha iyo Platform-ka. Si gaar ah, isticmaalka waa sida soo socota:
- marin u helidda iyo adeegsiga Platform-ka adeegsadaha;
- maareynta hawlgalka iyo tayaynta Platform-ka;
- hirgelinta kaalmada adeegsadaha;
- xaqiijinta, aqoonsiga iyo xaqiijinta xogta uu gudbiyay adeegsadaha;
- shakhsiyeynta adeegyada adoo soo bandhigaya xayeysiis ku saleysan taariikhda daalacashada isticmaaleha, sida ku xusan dookhooda;
- ka hortagga iyo ogaanshaha khayaanada, khayaanada (softiweerka xun) iyo maareynta dhacdooyinka amniga;
- maaraynta wixii khilaafaad ah ee ka dhex dhaca dadka isticmaala;
- dirista macluumaadka ganacsiga iyo xayeysiinta, sida ku xusan dookha isticmaalaha;
- abaabulka shuruudaha isticmaalka Adeegyada Bixinta.
Qodobka 10aad - Siyaasadda haynta xogta
Barxadku wuxuu hayaa xogtaada waqtiga lagama maarmaanka u ah inuu ku siiyo adeegyadiisa ama inuu ku siiyo caawimaad.
Ilaa iyo inta macquul ahaan loo baahan yahay ama looga baahan yahay in lala kulmo waajibaadka sharciga ama sharciyeynta, xallinta khilaafaadka, ka hortagga khayaanada iyo xadgudubka, ama lagu dhaqan geliyo xeerarkayaga iyo shuruudahayaga, waxa laga yaabaa inaan sidoo kale xafidno qaar ka mid ah macluumaadkaaga sida loogu baahdo, xitaa ka dib markaad xirto koontadaada. ama inaanan mar dambe u baahnayn inaan ku siino adeegyo.
Qodobka 11- Wadaagista macluumaadka shakhsiga ah dhinacyada saddexaad
Xogta shaqsiyeed waxaa lala wadaagi karaa shirkadaha dhinac saddexaad gaar ahaan Midowga Yurub, xaaladaha soo socda:
- marka isticmaaluhu u adeegsado adeegyada lacag bixinta, hirgelinta adeegyadan, Platform-ku wuxuu xiriir la leeyahay bangiyada saddexaad iyo shirkadaha maaliyadeed ee ay qandaraaska la gashay;
- Markuu isticmaalehu faafiyo macluumaad ay heli karaan dadweynaha meelaha faallooyinka bilaashka ah ee Barxada;
- marka isticmaaluhu u oggolaado websaydhka dhinac saddexaad inuu helo xogtiisa;
- marka Barxadku adeegsado adeegyada bixiyeyaasha si ay u siiso caawimaad adeegsadaha, xayeysiinta iyo adeegyada lacag bixinta. Adeeg bixiyayaashani waxay leeyihiin helitaan xadidan ee macluumaadka isticmaalaha, oo qayb ka ah waxqabadka adeegyadan, waxayna leeyihiin waajibaad qandaraas ah inay u adeegsadaan iyaga oo raacaya qodobbada sharciyada khuseeya ee ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. shaqaalaha;
- haddii sharcigu u baahan yahay, Platform-ka waxaa laga yaabaa inuu soo gudbiyo xog si looga jawaabo cabashooyinka laga qabo Platform-ka lana waafajiyo nidaamka maamulka iyo sharciga;
Qodobka 12 - Dalabyo ganacsi
Waxaad u badan tahay inaad ka hesho dalabyo ganacsi daabacaadaha. Haddii aadan rabin, fadlan nagala soo xiriir: contact@truffes-vip.com
Xogtaada waxay u egtahay inay u isticmaali doonaan la-hawlgalayaasha daabacaadaha ujeedooyin ujeeddo ganacsi, Haddii aadan rabin, fadlan nagala soo xiriir: contact@truffes-vip.com
Haddii, intaad la tashanayso goobta, aad marin u hesho xogta shakhsiga ah, waa inaad ka gaabsataa ururinta, adeegsi kasta oo aan la oggolaan iyo ficil kasta oo noqon kara duulaanka asturnaanta ama sumcadda shaqsiyaadka. Daabacaha ayaa diidaya dhammaan mas'uuliyadda arrintan la xiriirta.
Xogta waa la hayaa oo waxaa loo isticmaalaa in muddo ah iyadoo la raacayo sharciga dhaqan galkiisa.
Qodobka 13 - Kukiyada
Waa maxay buskudku ”?
A "Cookie" ama raad raac waa feyl elektiroonig ah oo la dhigo terminal (kombiyuutar, kiniin, taleefan casri ah, iwm.) Waxna u akhri tusaale ahaan markaad la tashanayso degel, akhrinayso emaylka, rakibidda ama adeegsiga softiweerka ama barnaamijka moobiilka, iyadoon loo eegin nooca terminaalka la isticmaalay (xigasho: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).
Adiga oo ka baaraya boggan, "cookies" ka socda shirkadda mas'uulka ka ah goobta ay khuseyso iyo / ama shirkadaha dhinac saddexaad ayaa laga yaabaa in la dhigo saldhiggaaga.
Marka ugu horeysa ee aad daalacatid degelkan, banner sharaxaad ka bixinaya isticmaalka "cookies" ayaa soo muuqan doona. Sidaa darteed, adoo sii wada baaraya, macmiilka iyo / ama rajada waxaa loo qaddarin doonaa in lala socodsiiyo iyo inay aqbaleen adeegsiga "cookies" la yiri. Oggolaanshaha la bixiyey wuxuu ansax noqonayaa illaa saddex iyo toban (13) bilood. Isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu ka joojiyo cookies-ka bogagga shabakaddooda biraawsarka.
Dhammaan macluumaadka la ururiyey waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya in lagu raadiyo mugga, nooca iyo qaabeynta taraafikada iyadoo la adeegsanayo boggan, si loo horumariyo nashqadeyntiisa iyo qaabeynta iyo ujeeddooyin kale oo maamul iyo qorsheyn iyo guud ahaan si loo hagaajiyo adeegga. in aan kuu soo bandhigno.
Kukiyada soo socda ayaa ku jira boggan:
- Google Analytics: waxaa loo isticmaalay in lagu cabbiro dhagaystayaasha goobta.
- Maareeyaha tag Google: wuxuu fududeeyaa hirgelinta astaamaha bogagga wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad maamusho astaamaha Google.
- Google Adsense: Shabakada xayeysiinta ee Google iyadoo la adeegsanayo degello ama fiidiyowyo YouTube ah oo lagu taageerayo xayeysiisyadeeda.
- Dib-u-habeynta Google Dynamic: waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku siiso xayeysiin firfircoon oo ku saleysan raadinti hore.
- Beddelka Google Adwords: qalab loogu talagalay la socodka ololayaasha xayeysiinta adwords.
- DoubleClick: Kukiyada xayeysiinta Google si loogu qaybiyo boorar.
Nolosha buskudyadan waa saddex iyo toban bilood.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan isticmaalka, maareynta iyo tirtirka "cookies", nooc kasta oo biraawsar ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la tashato xiriirka soo socda: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
Qodobka 14 - Sawirro iyo matalaadda alaabooyinka
Sawirada badeecadaha iyo / ama adeegyada, oo ay la socdaan sharraxaaddooda, qandaraas ma ahan mana xirayo daabacaha.
Qodobka 15 - Sharciga lagu dabaqi karo
Shuruudahaan isticmaalka goobta waxaa xukumaya sharciga Faransiiska wuxuuna ku xiran yahay xukunka maxkamadaha xafiiska madaxa madbacadda, iyadoo loo cuskanayo u gaar ahaanshaha xukun ka soo baxa sharci ama sharci gaar ah.
Qodobka 16 - Nala soo xiriir
Wixii su'aalo ah, macluumaad ku saabsan alaabooyinka lagu soo bandhigay goobta, ama khuseeya goobta lafteeda, waxaad farriin uga tagi kartaa cinwaanka soo socda: contact@truffes-vip.com